Video-NingBo COFF Machines Co., ltd
Tamin'ny 1 aprily 2022, ny iray amin'ireo vahiny dia nankinina tamin'ny VTRUST, ilay fikambanana manao fitiliana manam-pahefana, hanao fanaraha-maso feno amin'ny famokarana amin'ny COFF. Amin'ny maha mpanamboatra fitaovana fanaovana labiera vita amin'ny labiera, ny fizotran'ny famokarana COFF rehetra sy ny fenitra fanaraha-maso kalitao dia saika mahatratra ny fenitra ISO. Vokatr'izany dia mahazo laza tsara avy amin'ny VTRUST ny COFF. Ny COFF dia nitazona hatrany ny foto-kevitry ny mpanjifa ho voalohany, serivisy amin'ny fo manontolo ary kalitao avo lenta. Mino izahay fa hihatsara kokoa ny COFF.
500L Brewhouse-etona nafanaina, notaterina tao Yokohama, Japon
Ny tolotra voalohany ho an'ny mpanjifa sy ny serivisy dia ny filozofian'ny orinasan'ny COFF foana, izay nanampy ny COFF hahazo mpanjifa mahatoky bebe kokoa. Ity lahatsary ity dia mifandraika amin'ny olana amin'ny famenoana votoaty oksizenina izay tena mampanahy ny mpanjifa. Ny COFF dia nanampy fitaovana fandroahana gazy karbonika ao anaty tank alohan'ny famenoana, mba hahafahan'ny mpanjifa mahazo vokatra tsara kokoa amin'ny vidiny ambany kokoa. Midika izany fa toy izao manaraka izao ny fiasan'ity milina ity miaraka amin'ny loha famenoana 12 sy milina famenoana 1: afaka manondraka CO2 -- mandrotsaka CO2 alohan'ny famenoana -- mameno -- mandroaka C02 alohan'ny mametaka -- mametaka -- manadio ny ety ambonin'ny tany.Ambarana eto fa ny ankamaroan'ny fitaovana famenoana kely novokarina tany Shina dia tsy manana fomba fiasa maro, ary tsy misy tsara kokoa. fomba hifehezana ny votoatin'ny oksizenina. Ny COFF dia handinika antsipiriany maro hampiasain'ny mpanjifa. Iray amin'ireo filozofian'ny serivisy mpanjifa COFF izany.
10BBL Rafitra fanamasinana afo
10BBL rafitra fanafoanana afo dia rafitra maodely. Ny haben'ny fitaovana dia: 4900mm * 2000mm * 2560mm avo. Ny fiasan'ny fitaovana dia ny: fanivanana saccharification, tanko mangotraka (fanamainana afo), ary fihodinana sy fidinana. Raha heverina fa tsy mila mametraka eo amin'ny tranokala indray ny mpanjifa, ny foto-kevitray dia ny fametrahana ireo kaontenera telo amin'ny talantalana iray ambany, izay mitsitsy ny vidin'ny fametrahana ny mpanjifa.